Blog mitombo haingana indrindra eto amin'ny planeta? | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 7, 2006 Zoma, Oktobra 24, 2014 Douglas Karr
Herintaona lasa izay (2005) dia nanapa-kevitra aho fa mila mametraka tanjona teknolojia ho ahy. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny olona toa an'i Seth Godin, Malcolm Gladwell, Robert Scoble ary Shel Israel, mitsoraka bilaogy aho, tambajotra sosialy, fanatsarana motera fikarohana, ary Analytics ary koa ireo teknolojia ifotony nanosika azy ireo. Tsy siansa rocket izany, fa efa fotoana nahafinaritra teo amin'ny fiainako. Nahita ny fitiavako aho, ary natoky tena betsaka tamin'ny fahaizako.
Hatramin'ny farany teo dia nihoatra ny sasany tamin'ireo bilaogera tena nanabe ahy aho. Izany no tokony ho fiderana farany an'ireo olona ireo (manantena aho fa hanao izany!). Miaraka amina bilaogy 55,000,000 izay voatazona amin'ny alàlan'ny Technorati, mihazakazaka haingana aho izao ary mahatratra 35,000 na mihoatra izany. Fitomboana mahafinaritra izany ary tokony hisarika ny sain'ny sasany eo amin'ny sehatra. Mbola tsy ao anatin'ny Top 100 aho, ary tsy nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny bilaogy… fa ny asa mafy sy ny fahalalako ny lohahevitro dia nahitam-bokany Na eo aza ny fitokonana marobe amiko:
Tsy manankarena aho
Tsy malaza aho
Tsy manana fampahalalana 'anaty' ao amin'ny orinasa aho
Tsy manana fifandraisana indostrialy aho
Tsy mipetraka any Silicon Valley aho (mipetraka any Indiana aho!)
Mbola tsy nanoratra boky aho (mbola!)
Miasa miasa manontolo andro aho ary miasa koa
Ny sasany amin'ireo tombony azoko:
Manana fampiantranoana manokana aho ka ny fametrahana ny tranokalako ary ny fitazonana azy dia mofomamy iray.
Afaka manao programa aho. WordPress dia sehatra fitorahana bilaogy mahavariana, saingy tsy maintsy 'nanova' ny lohahevitro sy ireo an'ny mpanjifako aho mba hanatsara azy ireo amin'ny fampiasana sy ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, heveriko fa mahavariana ireto statistika manaraka ireto ary miresaka ny asa mafy nataoko. Ity misy lisitr'ireo bilaogy Top 100 na bilaogera fanta-daza sy ny fitomboany 3 volana (Alexa.com). Marina fa mbola lavitra ny lalana tokony halehako alohan'ny hidirako ao amin'ny ambaratonga ambony amin'ny tontolon'ny bilaogy - saingy mbola manome porofo izao fa nahasoa sy nifantoka ny atin'ny bilaogiko.
Mamorona mpampiasa mankafy
Ahoana no nahavitako an'ity fandrosoana ity? Tsy maintsy manao famakiana kely fotsiny ianao eto, fa tsy niaro tsiambaratelo aho. Eto amin'ity bilaogy ity daholo… ny fanandramana, ny valiny, ny zava-drehetra! Angamba ny vaovao mahaliana indrindra amin'ny tara dia ny fizarana an'io fahalalana io amin'ireo bilaogera vaovao. Manontany hevitra vitsivitsy aho izao ary manampy azy ireo. Manantena ny andro hialàn'ny statistikan'izy ireo ahy aho (antenaina fa ao amin'ny Top 100 aho!).
Misaotra namaky! Misaotra naneho hevitra! Misaotra niverina! Raha misy lohahevitra tianao horesahiko, azafady aza misalasala. Tsy dia lany mihitsy ny fampahalalana hitoraka bilaogy momba ahy - fa tiako ny fotoana hijerena lohahevitra nofidinao.
Fantatro fa tsy izaho no bilaogy mitombo haingana indrindra eto ambonin'ny planeta… fa ny asa mafy ataoko is mandoa vola. Miverena hatrany, mbola hizara aminao aho!
Tags: fitomboan'ny fitorahana bilaogymitombo ny blôginaofitomboanamalcolm gladwellrobert scobleseth godinShel IsraelTechnoratiWordPress
Google Maps izao miaraka amin'ny Support an'ny KML
Dec 7, 2006 ao amin'ny 9: PM PM
Hey Doug, arahaba soa amin'ny fitomboanao. Heveriko fa hazakazaka soavaly miaraka aminao izahay. Nanomboka koa herintaona lasa izay…
Dec 7, 2006 ao amin'ny 10: PM PM
Misaotra, Scott! Ary miarahaba anao ihany koa ry havana! Ny zavatra iray tiako amin'ity hazakazaka ity dia ny hoe afaka mandresy ny olona rehetra ary misy toerana malalaka kokoa ho an'ireo 'mpandresy'!
Dec 8, 2006 amin'ny 12: 47 AM
Asa tsara Doug. Nisoratra anarana tao amin'ny bilaoginao aho nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay, ary hatreto dia tena tiako ny zavatra hitako. Amin'ny maha mpitoraka bilaogy ahy vao manomboka (ary miaraka amin'ny fitokonana mitovy amiko), fantatro fa sarotra be ny misarika mpamaky vaovao rehefa manomboka ianao. Tohizo ny asa tsara!
Dec 8, 2006 amin'ny 6: 36 AM
Misaotra noho ianao hazondamosiko sy namako teknika. Manantena aho fa afaka manao (ho anao) izay nataonao ho an'ireo "mpanoro hevitra" anao - Mandalo anao !! Haha !! Tsy dia ela aho no nanana salanisa 3 volana, saingy toa mandeha tsara aho… misaotra anao.
Laharana fifamoivoizana ho an'ny patcoyle.net:
Androany 1 wk. Avg. 3 mos. Avg. 3 mos. fiovana
Satria tsy izaho no voalohany, dia tsy mandefa eto fotsiny aho mba hamerenako ny fifamoivoizana amin'ny bilaogiko ihany koa.
Dec 8, 2006 ao amin'ny 4: PM PM
Teny tsara izany. Tena tiako izany. Tsy dia tiako loatra ny manonona ny fitomboan'ny bilaogiko - fa indraindray rehefa tsy manana ny anarana na ny laza ianao dia mila ampahafantaro ny olona fa mbola mendrika ny fiahiany ianao.
Tamin'ny fotoana nandefasako farany momba ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny bilaogiko, dia nampitombo be ny fatrany. (http://www.dknewmedia.com/2006/09/03/my-blog-is-better-than-9986-of-all-other-blogs/)
Manontany tena aho hoe inona no milaza momba antsika mpamaky? Misoratra anarana amin'ny bilaogin'i Johnathon Chow aho izao rehefa avy namaky ny fahombiazany nilaza ny bilaoginy. Azo antoka fa, zavatra betsaka no nianarako avy aminy koa! Tsy tazana ihany koa ireo statistiny.
Mamerina ny fisaorana anao! Ary raha mila fanampiana ianao dia aza misalasala manontany!